Owesifazane uchumise ibhizinisi lasekhaya enikwa amatomu
UKUPHIKELELA nokuhlala ezimisele ngokufunda, kumsizile uNksz Zanele Khumalo, oyimenenja eMojos Car Wash & Shisanyama Isithombe: SITHUNYELWE
Zimbili Vilakazi | April 2, 2022
UKUPHIKELELA nokuhlale elangazelele ukufunda yikhona okumlekelele ukuthi abe neqhaza ekukhuliseni ibhizini lasekhaya.
Lokhu kuvezwe wuNksz Zanele Khumalo, oyimenenja eMojos Car Wash and Shisanyama, eseCato Manor, eMayville, eThekwini. Uthe ibhizinisi laqalwa wumfowabo kodwa manje sekuyena imenenja yalo.
Uthe umfowabo, uMnuz Sbusiso Khumalo, walisungula ngo-2005. Uthi ngaleso sikhathi kwakuwashwa izimoto kuphela kanti lalibizwa ngeCorner’s Car Wash.
Ngokuqhubeka kweminyaka, kwanda amakhasimende abedinga izinto ezehlukene, belokhu belincenga kancane kancane.
“Ngaleso sikhathi bengikhona nami kodwa ngiwumsebenzi nje ojwayelekile. Bengilokhu ngizihlupha kakhulu ngokwazi izinto ezahlukene eziphathelene nalo ibhizinisi,” kusho yena.
Uthi bekungu-2016, lapho beqale khona ukuthola imvume egcwele yokuhweba, banezezela ngokudayia utshwala nokudla okuvuthiwe.
“Ngaleso sikhathi umfowethu wanginika ngokusemthethweni izintambo ukuthi kube yimi ozobhekelela konke ukusebenza kwendawo, yena abambe esokuba yisikhulu esiphezulu,” usho kanje.
Uthe ngenxa yokuphokophelela ukuthi ibhizinisi lidlondlobale, uhambe wayokwenza izifundo zeHuman Resources eDurban University of Technology (DUT).
Uthi lokho kumsize kakhulu ngoba kudlale enkulu indima ekutheni afunde ukuthi usebenzisana kanjani nabasebenzi nokuthi ulithuthukisa kanjani ibhizinisi.
“Izifundo azingilekelelanga nje kuphela ngokungicija ukuthi ngisebenzisana kanjani nabasebenzi, kodwa ziphinde zadlala indima ekunginikeni ulwazi ebengiludinga ekutheni ngiliphatha kanjani ibhizinisi ukuze libe yile nto eliyilo njengamanje,” kusho uNksz Khumalo.
Uthi usahlala ahlale aye kumfowabo uma kukhona lapho edinga khona izaluleko ezithile futhi ukwesekwa amnika khona, kuyamjabulisa. Njengamanje leli bhizinisi liqashe abasebenzi abangu-50, kanti bonke bavela khona endaweni yaseCato Manor.
Uthi ukuphatha ibhizinisi akulula njengoba wonke umuntu ecabanga kodwa kudinga ukuthi uvuke, ukhahlele ingubo, uqonde khona noma ngabe uzwa ukuthi akuvumi.
“Ukuze ibhizinisi lisebenze kufanele ube nomqondo wokuphikelela noma ngabe izinto zibheda kangakanani, noma ngabe kuthule kangakanani kodwa kumele uvuke uyosebenza,” kubeka uNksz Khumalo.
Uthe into eyenza ukuthi aphumelele kuleli bhizinisi elivame ukuphathwa kakhulu ngabantu besilisa, ukusebenza ngokuzikhandla, ukulalela uma kukhona abambonisa ngokuthile nokubambisana nethimba labasebenzi bakhe. Uthi konke lokhu kwenza awuzwe ulula umsebenzi wakhe.
Uthe eminyakeni eyishumi ezayo ufisa ukuthi ibhizinisi lidlondlobale kakhulu kunalokhu eliyikho njengamanje, ikhasimende likwazi ukuthola ukunakekelwa ekusezingeni laseMhlanga khona lapha eMojos, eselokishini iCato Manor.